प्रशिक्षक साम्पोली अधिकार विहिन अवस्थामा - Lokpath Lokpath
२०७५, १० असार आईतवार ०७:५३
प्रशिक्षक साम्पोली अधिकार विहिन अवस्थामा
प्रकाशित मिति : २०७५, १० असार आईतवार ०७:५३
काठमाडौं । जारी विश्वकप फुटबलको सुरुवाती २ खेलमा खराब प्रदर्शन गरेपछि आलोचित बनेको अर्जेन्टिनी खेलाडीहरु प्रशिक्षक जर्ज साम्पोली विरुद्ध उत्रिएका छन ।
यहि मंगलबार हुने नाइजेरिया विरुद्धको खेलअघि खेलाडीहरुले प्रशिक्षक साम्पाओलीलाई अधिकार विहिन बनाएका हुन् । समूह चरणको पहिलो खेलमा आइसल्याण्डसँग बराबरीमा रोकिएको अर्जेन्टिना दोस्रो खेलमा भने क्रोएसियासँग ३० को लज्जास्पद हार व्यहोरेसँगै टोलीका सिनियर खेलाडीहरुबीच मतभेद देखिएको छ ।
अब अर्जेन्टिनी टोलीका सदस्य रिकार्डो जिउस्टीले नाइजेरिया विरुद्धको खेलका लागी खेलाडीहरुको टोलीको निर्धारण गर्नेछन् ।
साम्पाओलीलाई प्रशिक्षकको कुनै अधिकार नदिएपछि अर्जेन्टिनी टिममा ठुलो मतभेद भएको थियो । दोस्रो खेलमा क्रोएसिया विरुद्धको खेलमा हार बेहोरेपछि प्रशिक्षक साम्पाओलीले सबै दोष खेलाडीहरुमाथि दोष थोपरेपछि खेलाडीहरु रुष्ट बनेका थिए ।
अब व्यवसायिक गाडीहरु पनि अनलाईनबाटै खरिद बिक्री गर्न सकिने
काठमाडौं । टाटा मोटर्सका व्यवसायिक गाडी बिक्री वितरणका लागि सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.को आधिकारिक
३० रुपैयाँको चिट्ठाले रातारात करोडपति…!
काठमाडौं । भनिन्छ भगवानले दिए भने के हुँदैन ? सबैकुरा भगवानले नै दिएर
विवाह गरेको २ हप्तापछि पत्नी पुरुष भएको थाहा पाएपछि…
काठमाडौं । घरमा जब कसैको विवाह हुन्छ तब हाम्रो खुसी नै फरक हुन्छ
लद्दाखमा फेरी शुरु भयो चहलपहल : चीनले तैनाथ गर्यो लाडाकू विमान
काठमाडौं । भारत र चीनको सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा जारी तनावका बीच चीनले
१०० वर्षमा पहिलोपटक चीनमा बाढीबाट यति धेरै बिध्वंश, (हेर्नुहोस् ३१…
खलङ्गा-खार-देथला सडकखण्ड दुईतर्फी अवरुद्ध, स्थानीयलाई हिँडडुलमै समस्या
एउटा खोला तर्न एक हजार रुपैयाँ !
पार्टी फुटाएर गए ‘वामदेव’ होइन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगे